Cabdirisaaq Xaaji Xuseen ololihiisii 1969 iyo kan 2004
Faarax M Othman <faaraxmcismaan@hotmail.com>
Qolalka internet ee somalidu wax qoraan mid kamid ah baan waxaa ku qorraa in Cabdirisaaq xaaji xuseen uu Nairobi yimid. Nairibina waxaa sida la ogsoonyahay kasocda shirar iyo ololayaal badan oo loogu tartamaayo madaxtinimada somalia.
Hadaba sidaan lasocono Cabdirsaaq kamid maahan ragga u tartamaaya jagada madaxtinimada somalia! Hadaba su,aasha iswaydiinta mudan waxaa weeye maxaa cabdirsaaq kakeenay USA oo Kenya uu kasoo doonay maadama uu loolanka siyaasadeed banaanka kayahay?
Si aan jawaab u helo bal aan dib ugu noqono taariikhda? siiba dhacdooyin dhacay dhamaadki 60aadkii.
Markii doorashadii 1967 ay dhacday cabdirisaaq kuma uusan samrin ee olole balaar buu meeshiisii kawaday, ololahaas oo ahaa mid dadku ay u arkeen inuu marmar badan akhlaaqiyaadka siyaasadeed iyo qawaaniintii qarankaba dhinac maray taas oo marmar badan keeni jirtay in muranka kusaabsan waxa cabdirisaaq laga yeelilahaa uu gaaro heer xumuukameed.
Marna madhicin in cabdirisaaq laxiro ama nooc ciqaab ah loo soo gaysto iyadoo aflagaadada iyo guubaabada siyaasadeed ay ahayd mid dhaqan u ah cabdirisaaq.
Cabdirsaaq ololihii uu waday 1967-1969 wuxuu gaaray heer uu ku khudbeeyo... "ciidamad qaranku maxay sugayaan may wadanka ka badbaadiyaan tre capuchino" "tre cappuchino" waxa la oran jiray Cabdirashiid cali sharmaarke, Yaasiin nuur bidde iyo maxamed ibraahim Cigaal.
Ololahaas siyaasadeed ee uu cabdirisaaq waday 1969 wuxuu ahaa mid uusan doorasho ugu diyaar garoobayn wuxuu ahaa mid dadku ay layaabeen dhinaca uu u socdo waayo wakhti doorasho lama joogin.
Laakiin Cabdirisaaq waxaa u muuqday ololihiisu inuu ugu gogol, xaarayay isbadal ay sameeyaan ciidanku kadibna ay doorasho timaado kadibna uu dooorashadaas wax ku helo. Taas oo la oran karo ololihii cabdirsaaq 1969 wuxuu ugu gogol xaarayay in Ciidanku ay xukunka qabsadaan. Hadalkiisii ahaa Ciidanku maxay faraha uga laabnayaan ayaa run ku noqday. Laakiin Cabdirisaaq waxba kuma uusan helin, waayo rayid buu ka ahaa.
Maantana Cabdirisaaq ragga meesha isku haysta wuxuu kayahay rayid wuxuuna kasoo dhoofay carro fog wuuna iska soo safray cidina yeeli mayso.. Su'aashu waxaa weeye yaa cabdirisaaq rabaa inuu xukunka qabsado oo uu wax kuhelo.
Ololihii cabdirisaaq 1969 wuxuu keenay in Ciidanku wadakan qabsado oo qaab nololeedkii somalida oo dhan uu badalmo. Waxaana ilaahay karajaynayanaa in arinta uu cabdirisaaq u tagay Nairobi aysan natiijadeedu noqon sidii tii 1969.
�Galayax iyo Gabayadii[Qormadii Shaafici]